Madheshvani : The voice of Madhesh - कोरोना रोकथामका लागि प्रदेश सरकारको कुनै सक्रियता छैन : हरिप्रसाद मण्डल
मेयर, महिटहानी नगरपालिका
हरिप्रसाद मण्डल, मेयर, महिटहानी नगरपालिका File Photo
० मटिहानी नगरपालिका सीमावर्ती इलाका हो, नेपाल–भारत सीमामा आवत–जावत सहजरुपमा हुने गरेको छ । भारतमा कोरोना तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ, नेपाल भित्रिन नदिन के–के गर्दै हुनुहुन्छ ?
— वैश्विक महाममारीको रुपमा फैलिरहेको महामारीलाई नेपाल भित्रिन नदिन हामीले पूर्ण सतर्कता अपनाइरहेका छौं । हामीले नगरपालिकाभित्र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । हरेक वडाहरुमा हामीले जनचेतनामूलक पोष्टर, ब्यानगर, हातेपर्चाहरु वितरण गरिरहेका छौं । नगरपालिकामा दुईटा नाकाबाट बढी आवत–जावत हुन्छ, त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरुसहितको हेल्थडेस्क राखेका छौं । भारतीय क्षेत्रबाट आउने जुनसुकै नागरिकहरु चेकजाँच गर्ने, हरेक यात्रुहरुलाई सेनिटाइजर दिएर हात धुन लगाउने त्यसपछि मात्रै नेपाल प्रवेश दिइरहेका छौं । कोरोनाबाट बच्नका लागि हामीले तीव्रगति आफ्ना अभियान चलाइरहेका छौं । यस्तै, हामीले माइकिङ्ग गरेर जनचेतना फैलाइरहेका छौं, धेरै मानिस भिडभाड हुन नदिनेका लागि सूचनाहरु प्रवाह गरिरहेका छौं ।
० नेपाल–भारत सीमा आवत–जावतको अवस्था के छ ?
— सीमा क्षेत्रमा हामीले सवारीसाधनलाई रोक लगाएका छौं । सदियौंदेखि खुला सिमाना भएकोले आवश्यक सामग्रीहरु किन्न यताका मानिस उता जाने, उताका मानिस यता आउने भएकोले कडाईका साथ मात्रै ओहोर–दोहोर गर्न दिइरहेका छौं । अति आवश्यक परे मात्र ओहोर–दोहोर गर्नका लागि हामीले कडाइ गरिरहेका छौं । सीमा पारी वा वारी जानै पर्ने अवस्था भए जाँच गरेर मात्रै जान दिने हामीले व्यवस्था गरेका छौं । अटेर गरेर सीमामा आवत–जावत गर्नेहरुलाई नियन्त्रणमा लिई जाँच गरेर मात्र प्रवेश दिइरहेका छौं । तसर्थ हामीले सीमा क्षेत्रमा अत्यन्त प्रभावकारी ढंगले सक्रियता जनाएका छौं ।
० जाँच गरेर आवत–जावत भइरहेको छ ?
— हामीले नगरस्तरमा एउटा छुट्टै टास्कफोर्स पनि बनाएका छौं । नगरको स्वास्थ्य सहसंयोजकको नेतृत्वमा हामी तयारी अवस्थामा छौं । एम्बुलेन्सलाई पनि हामीले तयारीमा अवस्थामा राखेका छौं । यदि कुनै गम्भीर खालका विरामी फेला परे भने उसलाई नियन्त्रणमा लिई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौं । व्यवस्थापनको पक्षमा हामीले आधुनिक किसिमले अगाडि बढिरहेका छौं ।
० तपाइँहरुले गर्ने चेकजाँच कतिको विश्वसनीय छ त ?
— विशेषगरी हामीले जाँच्ने भनेको तापक्रम नै हो । ज्वरो जाँच्नका लागि हामीले डिजिटल गन उपलब्ध गराएका छौं । कसैको यदि १०० डिग्रीभन्दा कम ज्वरो छ भने पठाउँछौं, होइन भने उसलाई नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने तयारी गरेका छौं । हालसम्म त्यस्ता गम्भीर विरामी भएका हामीले फेला पार्न सकेका छैनौं ।
० क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था छ ?
— नगरस्तरमा अहिलेसम्म हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिसकेका छैनौं । तर, जिल्लास्तरमा व्यवस्था मिलाइएको छ । जिल्लामै पठाउने भनेर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले भनेको छ । त्यस्ता रोगीहरु भेटियो भने जिल्लामा पठाउनु भनेर हामीले भनिएको छ । मटिहानी गरपालिकादेखि हाम्रो सदरमुकाम मात्र ६ किमि मात्र टाढा छ ।
० प्रदेश सरकारको पूर्वतयारी कस्तो छ ?
— प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कहीं कतै कुनै किसिमको तयारी गरेको हामीलाई जानकारी वा पत्राचार गरेको छैन । प्रदेश सरकारको सक्रियता हामीले देखेका छैनौं । म एउटा नगरपालिकाको प्रखुम भएकोले हामीसँग कुनै किसिमको सहकार्य वा प्रदेश सरकारको कुनै कार्यक्रम रहेको भन्ने जानकारी दिएको छैन । प्रदेश सरकारको तयारी कता हो त्यो पनि हामीलाई थाहा भएन । तर, हामीलाई प्रदेशबाट कुनै किसिमको तयारी वा समन्वय वा सहयोग प्राप्त भएको छैन ।
० भनेपछि प्रदेश सरकारको कुनै किसिमको सक्रियता छैन ?
— अहिलेसम्म त मलाई प्रदेशको सक्रियता वा पूर्वतयारीबारे हामीलाई थाहा भएन । अन्य पालिकाहरुमा केही गरेको कि भन्ने थाहा भएन ।
० संघीय सरकारबाट केही सहयोग ?
— प्रदेश सरकारभन्दा पनि संघीय सरकारको सक्रियता देखिएको छ । संघीय सरकारले हामीलाई विभिन्न किसिमका पत्राचारहरु गरिरहेको अवस्था छ । संघीय सरकारबाट मार्गनिर्देशनहरु हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ । कुनै सामग्री दिएर वा केही दिएर सहयोग त भएको छैन तर पत्राचार प्राप्त भइरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले न त हामीसँग कुनै सहकार्य नै गरेको छैन त पत्राचार नै अहिलेसम्म गरेको छ ।